သငျသညျသတ်သေကျူးလွန်လျှင်သင်ကောင်းကင် | Apg29
နော်ဝေမင်းသမီးမာသ-Louise ရဲ့ခင်ပွန်းဟောင်း Ari Behn
သငျသညျသတ်သေအားဖြင့်ကောင်းကင်သို့ get? ကျွန်မပထမဦးဆုံးတစ်ဦးအလွန်အရေးကြီးသောအမှန်တရားမှာတည်ထောင်လိုသော: ဒါဟာသင်ကျနော်တို့ကောင်းကင်ဘုံကိုသွားရှိမရှိဆုံးဖြတ်သည်သေဆုံးမည်သို့မည်ပုံမဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျယရှေုကိုပိုင်လျှင်သင်အရှင်သခင်အဖြစ်ကိုယ်တော်ကိုရရှိထားလျှင်အဆုံးအဖြတ်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ခရစ်စမတ်ညနေခင်းတွင်နော်ဝေမင်းသမီးမာသ-Louise ရဲ့ခင်ပွန်းဟောင်းသောသတင်းတို့သည် လာ. Ari Behn သတ်သေရှိပါတယ် ။ သူက 47 နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။
ဆှီဒငျသရုပ်ဆောင် Mikael Persbrandt Instagram ကိုအပေါ်ရေးသားခဲ့သည် :
RIP ။ Karekare အဘိဓါန် Ari, ငါ့မိတ်ဆွေတစ်ကျနော်တို့အောက်တိုဘာလတွင် Trondheim အတွက်အတူတကွထွက်ထားကြ၏။ သင်ကဒါငါ့ကိုနာကျင်ယခုငါမှောင်မိုက်ကိုသင်ယူနားလည်, သငျသညျအတွင်းရှားပါးအပူရှေးဟောင်းဝိညာဉျကိုတစ်ဦးအလင်းဝတ်ဆင်။ ငါသင်၏သားသမီးနှင့်သင့်မိသားစုဘို့ဆုတောင်းကြလော့, သင်တို့အဘို့ဆုတောင်းကြလော့။ သငျသညျညီအစျကိုငြိမ်းချမ်းရေးဆု။ ♥️
ငါ Ari Behn သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခဲ့ပါသည်အကြောင်းကိုမသိရပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါယေရှုသည်လူရဲ့တစ်ခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ရပ်များ၏တည်ရှိမှုအားဖြင့်ဝင်တိုက်သည့်အခါယရှေု, ရှိသည်နှင့်သင်သွားသညျယရှေုရှိပါက။ သူကအကူအညီတောင်းလိုအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေခြင်း, နှစ်သိမ့်။
Mikael Persbrandt ရေးသားခဲ့သည်: "အခုတော့ငါသည်မှောင်မိုက်ကိုသင် ယူ. , ဒါငါ့ကိုနာကျင်နားလည်ပါသည်။ " ယေရှုထံမှလူကိုကယ်တင်ပါလိမ့်မယ်ဒီသည်မှောင်မိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသားခငျြးသညျယရှေုခရစျသပေးကွပါစို့။
သငျသညျသတ်သေကျူးလွန်လျှင်သင်ကောင်းကင်သို့ get? ဒီပြဿနာရှိသည်သောသူအချို့လူတွေရှိပါတယ်။ ချစ်ရသူသတ်သေခဲ့ကြပေမည်, သူတို့သညျကောငျးကငျမှသွားပြီင့်လျှင်သင်တွေးမိ။
ကျွန်မပထမဦးဆုံးတစ်ဦးအလွန်အရေးကြီးသောအမှန်တရားမှာတည်ထောင်လိုသော: ဒါဟာသင်ကျနော်တို့ကောင်းကင်ဘုံကိုသွားရှိမရှိဆုံးဖြတ်သည်သေဆုံးမည်သို့မည်ပုံမဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျယရှေုကိုပိုင်လျှင်သင်အရှင်သခင်အဖြစ်ကိုယ်တော်ကိုရရှိထားလျှင်အဆုံးအဖြတ်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ရှိလျှင်တဦးတည်းလေထုထဲတွင်ရိုက်ကိုယ်တော်တိုင်ဖွင့်နှင့်ဗုံးခါးပတ်သည်ဟုမထင်နှင့်သင်ပရဒိသုတစ်ခုအာမခံချက်နေရာရှိသည်သူအချို့ရှိပါသည်။ အဘယ်သူမျှမပြုလုပ်ပါဘူး။ သငျသညျကောငျးကငျဘုံ၌တစ်ဦးကိုအာမခံသောအရပ်ရှိရမည်လျှင်, သင်သည်သင်၏အရှင်သခင်အဖြစ်သညျယရှေုကိုလက်ခံရရှိခဲ့ကြရပေမည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သငျသညျကောငျးကငျဘုံသို့မသွားပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာသင်ကောင်းကင်ဘုံကိုသွားမယ့်အထူးလမ်း၌သေလျှင်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ မဟုတ်သလိုသင်ငရဲသွားအခြားအထူးလမ်း၌သေလျှင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သငျသညျယရှေုကိုတိုသို့မဟုတ်မပါလျှင်အဘယ်သူမျှမ, သင်သည်အဘယ်သို့ကောင်းကင်သို့သို့မဟုတ်ငရဲကိုသွားရှိမရှိဆုံးဖြတ်သည်ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်ဤသင်ကောင်းကင်သို့ get ဒီတော့မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေရန်သာကြောင်းမဆိုလိုပါ။ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ ဘုရားသခင့သင်ကိုယ်တိုင်နာကျင်ချင်ပါဘူး။ ဘုရားသခငျသညျသငျသညျကိုခစျြသူသည်သင်တို့အဘို့အအစီအစဉ်များရှိပါတယ်။
တမန်တော်တစ်ဦးကျော်ကြားရာအရပျရှိပါသည်။ ပေါလုနှင့်သိလသည်ထောင်ထဲသို့ပစ်ချပါပြီ။ အကျဉ်းသားနားထောင်ခြင်းစဉ်တွင်ညနေပိုင်းတွင်သူတို့ဓမ္မသီချင်းမနာသီချင်းဆိုမည်။ ထိုအခါငလျင်လှုပ်ရှိလိမ့်မည်, ခြေချင်းချွတ်လဲများနှင့်အကျဉ်းထောင်တံခါးများဖွင့်လှစ်။
အဆိုပါထောင်မှူးကြောက်လန့်နဲ့သူ့ကိုထားနှင့်သူ၏အသက်တာတာ၏စဉ်းစားတွေးခေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါပေါလုအော်ဟစ်: ငါတို့ရှိသမျှသည်လက်ရှိဖတ်ရှုနေသောခေါင်းစဉ်များအတွက်, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိခိုက်စေပါဘူး။ ထိုအခါထောင်မှူး said: ငါကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်ဖို့ဘာလုပျသငျ့သလဲ ရှင်ပေါလုဖွကွေား: သခင်ယေရှုခရစ်၌ယုံနဲ့သင့်ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားကယ်တင်ခြင်းသို့နှင့်တကွသင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဘုရားသခငျသညျထိုကြောင့်သင်သည်မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေမဖြစ်သင့်လိမ့်မည်။ သူသည်သင်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်ဖို့လိုသည်။ ထိုသို့သာယေရှုခရစ်၌ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျသေးသညျယရှေုတက်သည်လှည် ့. သူ့ကိုလက်မခံကြလျှင်, သင်လုပ်သင့်ပါတယ်။
ယရှေုသညျလကျခံနှင့်သင့်နှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ, ကျယ်သောအသံနှင့်သူသခင်ဘုရားသည်နှင့်ဘုရားသခင်သည်သေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူကြောင်းစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်ကြောင်းရှင်းလင်းပါ။ ထိုအခါသင်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့နှင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်။ အားလုံးသင်၏အပြစ်ကိုလွတ်စေလျက်ရှိသည်။ သငျသညျဘုရားသခငျ၏ကလေးတစ်ဦးဖြစ်လာသည်။